Muxuu Joe Biden ku xushay Kamala Harris, maxayse ka caawin kartaa?
Musharraxa xisbiga dimoqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, ayaa senator Kamala xalay u xushay xilka madaxweyne ku xigeenka haddii uu doorashada November ku guuleysto.
Joe Biden bishii March ee sannadkaan ayuu u ballan qaaday, in mid ka mid ah lix dumar ah uu middood u xulan doono madaxweye ku xigeen, laakin dad badan ma fileyn in ay noqon doonto Kamala Harris.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter ayuu musharraxa xisbiga dimoqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Bisha Novmeber, Joe Biden uga dhawaaqay, in senetaradda laga soo doorto gobolka California, Kamala Harris uu u xushay in ay noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka haddii uu doorashada ku guuleysto.
Biden ayaa yiri. ‘‘Sharaf weyn ayay ii tahay inaan ku dhawaaqo in aan soo xushay Kamala Harris oo ah dagaalyahanad aanan gabban, waana mid ka mid ah dadka ugu wanaagsan ee waddanka u soo shaqeeyay’’. Wuxuu intaasi raaciyay ‘‘aniga iyo adiga si wada jir ah ayaan uga badineynaa Donald Trump.’’
Harris ayaa iyaduna qoraal ay ku daabacday barteeda Twitter ku sheegtay in ay sharaf u tahay in Joe Biden ay kula biirto musharaxnimada xisbiga ee doorashada soo socota. Biden ayay ku tilmaantay qof mideyn karta dadka Mareykanka, maadaama bay tiri uu noloshisa oo dhan u soo huray dadka Mareykanka.
Ololaha madaxweyne Donald Trump ayaa markiiba jawaab kulul ka bixiyay xulashada uu Joe Biden madaxweyne ku xigeenkiisa u soo xushay Kamala Harris.
Lataliyaha sare ee dhanka doorashada ee madaxweyne Trump, Katrina Pierson ayaa qoraal ay soo saartay ku sifeeyay Harris, in ay tahay xagjir ku tarax tagtay afkaaraha bidixda fog ee xisbiga dimoqraadiga.
KAMALA HARRIS WAA QOF CEYNKEE?
Kamala Harris waa 55 jir kasoo jeedda gobolka California. Waxaa iska dhalay aabo asal ahaan kasoo jeeda dalka Jamaica iyo hooyo Hindi ah. Ka hor inta ahsan noqon qofki labaad ee kasoo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ee abid xubin ka noqda Aqalka Senetka Mareykankasanadki 2016-ki, waxay soo noqotay Xeer İlaaliyaha Guud ee Gobolka California.
Sannadki 2019-ki waxay ka mid aheyd musharaxiintii ka qeybgalay doorashadi isreeb reebka ee qofka uu xisbiga dimqraadiga u soo xulan lahaa musharaxnimada xilka madaxweynaha.
Bilowgi hore ayay ku hartay hase yeeshee waxay indhaha dadka Mareykanka qabteen marki ay si aad ah ula dooday Joe Biden inti lagu guda jiray doodihii si reeb reebka.
Si kastaba ha ahaatee, Kamala Harris ayaa hadda gashay taariikhda Mareykanka, kaddib marki ay noqotay haweeneydi ugu horreysay oo madow ah oo loo soo sharraxo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka.
Maanta oo Arbaca ah ayaa lagu wadaa in iyada iyo Joe Biden ay si wada jir ah uga hadlaan munaasabad ka dhici doonta magaalada uu Joe Biden kasoo jeedo ee Wilmington ee gobolka Delaware.
Dhageyso Magacaabista Kamala Harris